International Hotel Projects - Armati Hotel Project Ao Shina
Armati Hotel Project Ao Shina
Alatsinainy, Febroary 1, 2016 9: 21: 19 AM America / Los_Angeles
Ny iray amin'ireo trano fandraisam-bahiny manomboka Armati 5 tetikasa any Sina, Azia, Tonga soa eto amin'ny mitsidika ity trano fandraisam-bahiny mba hahita ny faucet.
Armati 447 andian-dahatsoratra faucet catalouge azafady jereo izao manaraka izao:
Mametraha amin'ny toerana voalohany ny Changsha, Changsha vaya International Hotel mametraka ny zava-drehetra ny tanàna hanatitra ivelan'ny fotsiny ny am-baravarana. Dia manasongadina ny fananana isan-karazany ny toerana mba hahatonga ny hitoetra mahafinaritra traikefa. Manararaotra ny trano fandraisam-bahiny ny 24-efitra ora fanompoana, efitrano fanompoana, fianakaviana efitra, fiara zaridaina, trano ho an'ny kilemaina vahiny. Guestrooms dia manify amin'ny rehetra misy ao ianao tokony ho tsara ny matory alina. Ao ny sasany amin'ireo efi-trano, dia afaka mahita fahitalavitra vahiny, ny fidirana aterineto - LAN (fiderana), tsy fifohana sigara efitra, fahafahana miditra aterineto - Wireless, fandroana. To hanatsara vahiny 'nijanonany, ny trano fandraisam-bahiny dia manolotra ireo toerana fialana voly toy ny Golf Mazava ho azy (an-toerana), Sauna, fanorana, Spa, dobo an-trano. Friendly mpiasa, toerana lehibe sy akaiky akaiky izay rehetra Changsha tsy maintsy atolotra dia antony telo lehibe tokony hijanona ao Changsha vaya International Hotel